Paris Saint-Germain Waxay Dagaal U Cadaysatay Barcelona - L'Equipe - GOOL24.NET
Paris Saint-Germain Waxay Dagaal U Cadaysatay Barcelona – L’Equipe
October 11, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaan xidhiidh fiican lahayn labadii sanadood ee ugu danbeeyay waxaana jiray waxaabo gaar ah oo sii kala fogeeyay maamulada labada kooxood. Khilaafki xooganaa ee Barcelona iy PSG ku dhex maray heshiiskii Neymar Jr ayaa ahaa dhacdadii ugu waynayd ee labada kooxood khilaaf wayn ka dhex abuurtay.
Laakiin waxay xaaladu sii xumaatay markii ay Barcelona lafteedu isku dayday in ay Marco Verratti kala soo wareegto PSG wuxuuna markaas diiday in uu heshiis cusub saxiixo isaga oo waliba isku dayay in uu gadood sameeyo balse ugu danbayn maamulka PSG ayaa ku adkaystay in aanu bixi karin halka Barca ay awoodi wayday in ay qaabkii Neymar bixiso lacagta lagu iibsan karayay Verratti iyada oo aanu jirin qodob u ogolaanayay.
Laakiin markale xagaagii dhawaa ee la soo dhaafay Barcelona ayaa si wayn u doonaysay saxiixa xidiga kooxda PSG ee Adrien Rabiot waxayna taas maamulka PSG kaga jawaabeen in ay heshiisyo cusub u soo bandhigeen Adrien Rabiot laakiin waxa uu diiday afar jeer in uu wax heshiis cusub ah saxiixo taas oo keeni karta in uu si xor ah ugu soo biiri karo Barcelona.
Haddaba wargayska caanka ah ee L’Equipe oo ka mid ah wargaysyada ugu waa wayn ee dalka France ayaa shaaciyay in maamulka PSG ay dagaal u iclaamiyeen dhigooda Barcelona iyada oo madax waynaha PSG ee Nasser Al-Khelaifi uu ka sii cadhooday hadal uu Josep Maria Bartomeu ka sheegay idaacada Onda Cero.
Madax waynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa waraysi uu siiyay Onda Cero waxa uu ku soo dhaweeyay in xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA uu baadhitaan ku sameeyay kooxda PSG haddii ay jabisay sharciga dhaqaale wanaaga Yurub.
Laakiin sheekada ayaa soo dhaaftay erayo ama hadal wuxuuna madax waynaha PSG ee Nasser Al-Khelaifi uu qaaday talaabo muujinaysa colaada uu u hayo maamulka Barca isaga oo mid ka mid ah xubnaha fulinta kooxdiisa ka mamnuucay in uu ka qayb galo xaflad ay Barcelona soo abaabushay.
Al-Khelaifi ayaa diiday in Adrien Tarascan uu ka qayb galo xaflada ay Barcelona soo agaasintay iyada oo masuulkan PSG ka tirsani aanu ka qayb gali doonin xaflada Sports Technology Symposium ee socon doonta 15 October ilaa 16 October taas oo Camp Nou ka dhici doonta.
Xaflada shirka Camp Nou ee uu Nasser Al-Khelaifi u diiday masuulka kooxdiisu in uu ka qayb galo waxaa la qabanayaa markii afraad iyada oo kooxaha waa wayn ee Yurub iyo waliba shirkadaha dalka Maraykanku ay ka qayb galayaan balse PSG ayaa hadda si buuxda u cadaysay colaada fogaatay ee Barca kala dhexaysa.